Chọọchị American Native - WRSP
Chọọchị American Native
UMUAKA AMERIKA AMATIKA
OZI OZU OZI OMA AMERIKA
1880 Ojiji nke peyote na nhazi okpukpe ahaziri nke ọma n'etiti ndị India Indian malitere na Western OK.
1880s Quanah Parker, onye isi Comanche, were Peyote wee bụrụ onye ndu na-akwado maka iji peyote na mmekorita ndị India na ndị ọcha, yana ịlụ ọgụ maka ọnọdụ iwu peyote.
1911 Quanah Parker nwụrụ.
1918 Ejikọtara Chọọchị American Indian (yana aha ya mechara gbanwee gaa na The American American Church of North America), na Frank Eagle ghọrọ onye isi oche mbụ ya
1918-ugbu a Ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị American Indian bi na-esonye na Chọọchị American Indian nke North America.
Omume a na-ahụkarị na Chọọchị America bụ Ememe na sacrament nke peyote, psychoactive ma ọ bụ entheogenic cactus (lophophora williamsii), na omume ahụ n'etiti ndị Huichol na agbụrụ ndị ọzọ laghachiri ọtụtụ puku afọ na Mexico. Edebere ihe Peyote iji mee ihe na mbụ n'etiti ndị Aztec n'ihe dị ka afọ 400 gara aga, ọ bụkwa ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ nke mbụ na Mexico mere akụkọ banyere ya. Otú ọ dị, akụkọ ihe mere eme ya na United States karịa obodo ya (nke a machibidoro Rio Grande ndagwurugwu), ka ọ dị, ọ ka adịbeghị anya.
Okpukpe American Peyote dị ka ihe a haziri ahazi, nke a na-ahụkarị nke ọma nwere ike ịdọrọ n'ebe ọdịda anyanwụ Oklahoma n'ihe dị ka 1880. Site na mgbe ahụ, a na-etinye ụdị agbụrụ ndị dị na Southern Plains dị ka Comanche na Kiowa na ndoputa, ebe otu ndị India nweere onwe ha ga-ebi n'okpuru nsogbu siri ike n'ọnọdụ ọnọdụ ịda ogbenye . N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, mmegharị okpukpe ọhụrụ ndị mere ka mbelata dị njọ nke ndị India tara ahụhụ na nkwa e kwere ná nnwere onwe pụọ ná mmegbu gbasaa ngwa ngwa n'ebe nile Indian America. Otu ụdị mmegharị ahụ bụ Ghost Dance, nke nwere akụkụ ya a ma ama na 1890 mana ọ dara ada na Mgbu Ahụ merụrụ ahụ na njedebe nke afọ ahụ. Okpukpe Peyote, n'aka nke ọzọ, gbasaa ngwa ngwa karịa mpaghara nke amaala ahụ, na-emecha chọta ndị na-akwado ya na ọtụtụ narị agbụrụ.
Ọ bụ ezie na usoro mgbasa nke okpukpe peyote dị mgbagwoju anya ma bụrụ nke edebeghị nke ọma, ọtụtụ mmadụ na ebo nile kwenyere na ha di nkpa na usoro. Karịsịa ihe dị mkpa bụ Quanah Parker, onye isi Comanche nke ekwuru na mbụ buru peyote na Mexico na 1880s dị ka ọgwụ maka ọrịa siri ike, ma ọ bụ ikekwe nnukwu mmerụ ahụ. Quanah (dika a na-akpọkarị ya), onye nne ya dị ọcha na onye bụ onye na-akwado nkwado mmekọrịta ọcha na India, ghọrọ onye ndu na-akwado peyote ma bụrụ ihe enyemaka iji weghachite iwu ga-amachibido iji ya. Ka ọ na-erule oge ọ nwụrụ na 1911, ọtụtụ agbụrụ dị na Oklahoma na-eji peyote eme ihe. Onye nke abụọ na Quanah bụ mmetụta bụ John Wilson, onye Caddo Indian site na njikọ (nke Caddo, Delaware, na ọbara French). Na 1880 Wilson ghọrọ onye ụzọ n'okporo ụzọ, dị ka amaara onye ndu ememme ahụ, wee bido ịmasị ndị na-eso ya. Versiondị ya nke ememe Peyote nwere ihe ndị Kraịst doro anya karịa nke Quanah, na-atụgharị uche, ma eleghị anya, nke Katọlik nke Wilson. Agbanyeghị, nsụgharị abụọ ahụ na-egosipụta ngwakọta nke ọdịnala India na nke Ndị Kraịst.
Nke nta nke nta, ememe nke eji peyote gbasaa na agbụrụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ maka okwukwe ọhụrụ buuru ozi ya gaa na agbụrụ ndị na-anụbeghị banyere ya. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ mmekọrịta dị n'etiti agbụrụ ndị bi na nso dị nso dugara na mgbasa nke peyotism, otu onye ọrụ dị mkpa maka mgbasa ahụ bụ ịdị adị nke ụlọ ọrụ ndị jere ọtụtụ agbụrụ. Lọ akwụkwọ Carlisle Indian dị na Carlisle, Pennsylvania, bụ isi ihe jikọrọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana Haskell Institute (nke a maara ugbu a dị ka Haskell Indian Nations University) na Lawrence, Kansas. Ndị India si ebe a na-eji peyote akụziri ndị ọgbọ ha si n'akụkụ ndị ọzọ nke United States ụzọ peyote, na obere oge, okpukpe ọhụrụ ahụ rutere ọtụtụ India India.
Ntọala nke ụlọ ụka peyotist bịara na nzaghachi maka esemokwu banyere ojiji nke cactus nke na-eyi egwu iji ojiji ya eme mpụ. E hibere obere nzukọ abụọ oge mbụ, Peyote Society (ma ọ bụ Union Church Society), na Blọ Nzukọ nke Mbụ a mụrụ nke Kraịst na 1914. E mesịa na 1918, ndị omebe iwu US mere nnwale kpụ ọkụ n'ọnụ ọ kachasị ugbu a ruo taa iwu ojiji peyote. Na nzaghachi, n'ọtụtụ akụkụ na mkpali nke ọkà mmụta ihe banyere ala mmụọ nke Smithsonian Institution James Mooney, ndị isi okpukpe peyote si n'ọtụtụ agbụrụ gbakọtara na El Reno, Oklahoma, iji guzobe Chọọchị Ndị America nke America dị ka ụlọ ọrụ iwu kwadoro na iji chebe ihe dị ezigbo mkpa na ọdịnala dị nsọ nke India. Emechara gbanwere aha nzukọ a ịbụ Native American Church of North America, iji gosipụta eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị otu bi na Canada.
Taa ndị America American Church na-ekere òkè zuru ebe niile n'etiti ndị America Indian, na-adọta ikekwe otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị India niile. N'ihi ya, ọ bụ otu n'ime mmetụta kachasị ike na-eme ka ndụ ndị India taa. Controversga n'ihu esemokwu banyere iji peyote, na-akpali azịza siri ike nke ndị India, nwere mmetụta nke ime ka ọ bụrụ isi ihe njirimara American Indian.
ỤLỌ / EKWERE
Chọọchị American Native na-anọchite anya ngwakọta nke Iso Christianityzọ Kraịst na okpukpe ọdịnala ndị America America. Nkwenkwe ndị a kapịrị ọnụ gụnyere dịgasị nnọọ iche site n'otu agbụrụ gaa n'ọzọ. N'ozuzu, na Ọkara Ọnwa peyote ụzọ (nke Quanah Parker malitere) Iso Christianityzọ Kraịst, ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a, emeghị ka ọ pụta ìhè nke ukwuu; na ọdịnala Nnukwu Ọnwa (ma ọ bụ Cross Fire) (nke John Wilson malitere), Iso Christianityzọ Kraịst pụtara ìhè n'ụzọ doro anya.
A na-ahụta Peyote n'onwe ya dị ka ihe oriri nke nwere ike Chineke. A na-akpọkarị ya “ọgwụ,” ekwenyere na ọ nwere ikike ịgwọ ọrịa dị ike. Mgbe onye wereworo peyote na-agbapụta na mmeghachi omume nke ihe ahụ, a na-aghọta peyote ka ọ na-ehicha adịghị ọcha ndị dị n'uche na ahụ onye ahụ. O nwere ikike nke na-eme ka echiche na omume mmadụ ka mma. Ọ na-egbochi agụụ ị liụ mmanya na-aba n'anya wee si otú a bụrụ ọgwụgwọ maka aismụrụma. Ọ bụ onye nkụzi.
Ememe bụ isi nke Chọọchị American Native bụ ememe peyote. N'ọtụtụ agbụrụ, a na-eme emume dị otú ahụ ihe dị ka otu ugboro n'ọnwa ọ bụla, ọ bụ ezie na ọnụọgụgụ ugboro ole ahụ dịgasị iche na enwere ike ịme nzukọ pụrụ iche maka ebumnuche ụfọdụ.
Ihe omuma nke Quanah Parker nke ememe peyote ghọrọ ihe amara dika ememe ọnwa ọnwa, nke a na-akpọ n'ihi ọdịdị ọdịdị nke ebe ịchụàjà eji mee ya (nke a na-akpọkarị ụzọ Tipi, n'ihi na a na-eme emume na tipis); E guzobere ihe ndị bụ isi nke mmemme ahụ tupu ọ erute Oklahoma. N'ime ụdị ọdịiche abụọ dị iche iche nke ememe peyote ọ bụ Onye Kraịst na-apụtachaghị ìhè, na-atụkarị aka na mmụọ ndị India na mama ụwa. Akwụkwọ Nsọ anọghị n'ememe ndị ahụ, n'agbanyeghịkwa na a ghọtara Kraịst nke ọ bụla dịka ntọala nke okwukwe, ọ na-eche na a gaghị emesi ya ike. A maara ememme Wilson dị ka Nnukwu Ọnwa, ma ọ bụ na nso nso a Cross Fire, ememe; ọ bụ ihe Ndị Kraịst na-emesi ike karịa Ọnwa Ọkara, na-arịọ arịrịọ banyere Jizọs, iji Akwụkwọ Nsọ eme ihe, baptizim, na mgbe ụfọdụ, iji obe. Taa ọtụtụ ememme ọdịbendị dị iche iche, nke nwere ọdịiche dị iche iche nke mmetụta Ndị Kraịst, dị n'ọtụtụ ebe, ọ bụ ezie na esemokwu dị n'etiti ha abụghị nnukwu, na usoro izugbe nke ememe ahụ agbanwebeghị agbanwe kemgbe otu narị afọ.
Emume a na-amalitekarị na mgbatị ụbọchị Satọde. Menmụ nwoke bụ ndị isi na ememme a, agbanyeghị na ụmụ nwanyị na-aga ma na-esonye na ya. Ndị na-efe ofufe na-anọdụ ala na gburugburu gburugburu. Onye na-aga n'okporo ụzọ, onye na-eduzi, chere ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ. A na-enweta ihe dị iche iche eji eme mmemme, nke gụnyere onye na-efe ugo, ndị ọrụ a pịrị apị, opi oku, gourd na ịgbà. Na cedarman tụbara cedar na ọkụ, na-ewepụta anwụrụ ọkụ dị ọcha dị ka iwu si dị. Peyote kaktus na peyote tii na-ahụ gafere ebe; ndị sonyere na-eri ma ọ bụ na-a drinkụ otu ma ọ bụ nke ọzọ. Na-agagharị gburugburu, ndị na-eso ụzọ na-abụ abụ ọdịnala ruo oge ụfọdụ, na-akwụsị mgbe ụfọdụ mgbe a na-agafe peyote ọzọ gburugburu. N'etiti abalị mmiri na-agafe, wee nwee ezumike n'ememe ahụ. Mgbe ndị sonyere na ya batara n’ime ụlọ, a na-agụ egwu, ndị dị iche iche na-ekpekwa ekpere etu obi siri masị ha. A na-eme emume pụrụ iche maka ọgwụgwọ mgbe ụfọdụ. N’isi ụtụtụ, onye ụzọ ahụ na-abụ abụ Dawn; Nwanyị mmiri ahụ abịa na mmiri toụọ. O n’ebunye nri ụtụtụ dị mfe nke na-egosi njedebe nke emume a. Onye na-eme njem n'okporo ụzọ nwere ike inye onyinye, a na-agụkwa abụ ikpeazụ. A na-etinye ihe ndị dị n'ememe na ndị sonyere n'èzí. Nri na-ezuru oke ma na-atụrụ ndụ na-esochi, nwayọ nwayọ na-agbasasị.
Ndị otu nzụkọ ụka nke Native America anaghị ewepụ njikọ okpukpe ọzọ. Ndị otu nwere ike isonye na mmemme ọdịnala ọdịnala India dị iche iche, na ụka ụka ndị ọzọ, ma ọ bụ n'okpukpe ọ bụla ọzọ ha họọrọ.
Chọọchị American Native nwere ndị ruru 250,000 ndị na-eso ụzọ. A hụrụ ụka ụka n'etiti ọtụtụ narị narị agbụrụ India na United States.
Peyote bụ osisi na-emetụta uche nke ndị gọọmentị etiti na steeti na-achịkwa iwu ya. Ugboro ugboro esemokwu emeela ka ndị America Indian na-eji peyote eme ihe megide ndị ọchịchị. Ndị omebe iwu nke steeti na United States Congress atụlewo iwu na-amachibido ojiji ọ bụla nke peyote, ọbụlagodi n'ememe ọdịnala India. Na ọkwa gọọmentị etiti, mbọ ndị dị otu a enwebeghị nke ọma, mana ọtụtụ steeti bidoro machibidoro iji peyote eme ihe n’afọ 1917. Iwu ndị ahụ emeghị ihe ọ bụla iji kwụsị mgbasa okpukpe peyote, ma n’ezie, ọ ga-abụrịrị na ọ kpaliri ya site na ime ka ndị na-atụ egwu peyote nwee mmetụta a mkpa iji chebe okwukwe ha na ihu mkpagbu – si Indian ele ihe anya, nanị otu okwu ikpe nke Euro-American mmegbu nke ndị India. Na mkpokọta, iwu machibidoro inwe na peyote anaghị arụ ọrụ na ndoputa ndị India, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmanye iwu anaghị anwa ịkwụsị ọrụ metụtara peyote, gụnyere njem nke cactus si Texas, ebe ọ na-etolite, na ndoputa na ndị ọzọ. Ọnọdụ American Church.
Courtlọ ikpe kachasị ama ama banyere iji peyote eme ihe bụ Employment Division v. Smith (494 US 872), nke Courtlọikpe Kasị Elu nke United States kpebiri na 1990. A chụrụ ndị otu abụọ nọ na Chọọchị Ndị amaala America na ọrụ ha dị ka ndị ndụmọdụ maka mgbatị ọgwụ maka ojiji nke peyote . Ha gbara akwụkwọ maka ụgwọ a ga-akwụ ha maka enweghị ọrụ, mana a jụrụ ha n'ihi na a gbapụrụ ha maka "agwa ọjọọ". Ọtụtụ òtù okpukpe kwadoro nkwupụta ha na nnwere onwe ha n'okpukpe nke okpukpe kwesịrị ikwe ka ha jiri peyote mee ihe n'okpukpe ha, n'agbanyeghị na achọrọ ka ha rụọ ọrụ ha ka ha ghara ịnwe ọgwụ. E mechara kpee ikpe ahụ megide ndị peyotist; thelọikpe Kasị Elu kwuru na ha enweghị ikike nnwere onwe ikpe okpukpe nke gafere iwu ndị ọzọ na-adịghị mma. Ndị nnọchiteanya ahụ zara site na itinye Iwu Mweghachi nke Nnwere Onwe Okpukpe na 1993, nke chọrọ ịgbatị ikike mmega ahụ, mana nke thelọikpe Kasị Elu kagburu nke ahụ na 1997 dịka ihe ndị ahụ edepụtara na mbụ n'okwu Smith.
Aberle, F. David. 1966. Okpukpe Peyote n'etiti ndị Navajo. Chicago, IL: Aldine.
Anderson, F. Edward. 1980. Peyote: Chineke kaktus. Tucson, AZ: Mahadum nke Arizona Press.
Schaefer, D. Stacey na Peter T. Furst. 1996. Ndị Peyote. Albuquerque, NM: Mahadum nke New Mexico Press.
Smith, Huston na Reuben Agwọ, eds. 1996. Otu Mba N'okpuru Chineke: Mmeri nke Chọọchị American Native. Santa Fe, NM: Ndị na-ebipụta ìhè.
Stewart, C. Omer. 1987. Okpukpe Peyote: Akụkọ. Norman, OK: Mahadum Oklahoma Press.